चिनियाँ राजदुतको सक्रियताले टरेको हो ओलीको सत्ता संकट ? - NA MediaNA Mediaचिनियाँ राजदुतको सक्रियताले टरेको हो ओलीको सत्ता संकट ? - NA Media
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चिनियाँ राजदुत होउ याङ्कीको सक्रियतासँगै केही मथ्थर भएको छ । अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको मागसहित हेभिवेट नेताहरु उत्रिएपनि त्यो पार लाग्न सकेको छैन ।
पार्टीभित्र पेचिलो बन्दै गएको ओलीको राजीनामा माग मथ्थर हुनुभन्दा अघि चिनियाँ राजदुत होउ याङ्कीको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । उनले यस हप्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई भेटिन् । भेट नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा भएको हो ।\_